Siyazi ukuthi uzokuthokozela ngokuthenga kwakho kuComWales. Kodwa-ke, kungaba nezikhathi lapho uzodinga ukubuyisa izinto kithi @ Returns dept, Unit 21, The Innovation Center, EBBW VALE NP23 8XA. Sicela ubheke okucashunwe kule migomo nemibandela yokuthengisa okuvunyelwene ngayo ngezansi ukuthola imininingwane ephathelene nokubuyiselwa kwemali.
Uma ungazitholanga izinto zakho kufanele usazise zingakapheli izinsuku eziyi-7 kusukela ngosuku lokulethwa olucashile. Uma sesazi ukuthi awuyitholi into yakho sizophenya ngalolo daba ngaphakathi nangabathwali bethu. Ngeshwa asikwazi ukuphenya ukulethwa okungatholakali ngemuva kokuthi lesi sikhathi sesidlulile.
Uma ushintsha ingqondo yakho / Izinto ezingafuneki kungakapheli izinsuku eziyi-14 zokuthola kuphela.
E-Isitolo amakhasimende awakwazi ukukhansela uma into ikhokhelwe, isusiwe futhi isetshenziswa. Ku-inthanethi Uma usuvele ushintshe umqondo wakho nganoma iyiphi into e-odawe futhi ufisa ukuyibuyisela, khona-ke ngokuhambisana Nemibandela Yokuthengisa Okubanga (inkontileka yabathengi) ungakwenza lokho uma nje ungasazisa ngesinqumo sakho zingakapheli izinsuku eziyi-14 ukutholile.